Mudahaaraado looga caraysan yahay qaraxii xalay ee Boosaaso & dawladda oo dadka u soo jeedisay in ay is-dajiyaan. – Radio Daljir
Mudahaaraado looga caraysan yahay qaraxii xalay ee Boosaaso & dawladda oo dadka u soo jeedisay in ay is-dajiyaan.
Boosaaso, Dec 15 – Mudaharaaddo rabshada wadta ayaa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaasi oo looga xun yahay qaraxii miino ee xalay lala beegsaday ciidanka amniga ee magaalada Boosaaso.
Dadka bannaanbaxa dhigayey oo aad u tiro badanaa ayaa ku dhawaaqayey hal ku dhigyo ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin falkii weerar ee xalay lagu qaaday ciidanka ammaanka ee magaalada Boosaaso oo xilligaasi ku guda jiray hawlgallo ay ku xoojinayaan nabadgalyada magaalada.
Mudaharaadkaan oo ay samaynayeen boqollaal dadweyne ah oo aad u caraysan ayaa si weyn looga dareemay magaalada Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga Puntland, waxaana maanta xirmay inta badan goobaha ganacsiga iyo qaar ka mid ah iskuullada waxbarashada kadib markii ay ku soo qamaameen dadweyne dhagxaan tuurayey oo ka caraysanaa falkii weerer ee xalay.
Mas?uuliyiinta dawladda ee gobolka Bari, kuwa degmada Boosaaso iyo saraakiisha amniga ayaa si wadajir ah mudaharaadayaasha ugu sheegay in ay is-dejiyaan isla markaana ay joojiyaan rabashadaha ay samaynayaan.
Wasiirka amniga dawladda Puntland Gen. C/llaahi Siciid Samatar oo ay waraysi la yeelatay idaacadda Daljir ayaa shacabkii mudaharaadayey ka codsaday in ay si deg deg ah u joojiyaan bannaanbaxa isla markaana ay ka waan toobaan kala faquuqidda dadka ku sugan Puntland, taasi oo ka dambaysay kadib markii bannaanbaxayaashu ay si gaar ah u hujuumeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Boosaaso.
Wasiirku waxaa uu carabka ku dhuftay Puntland in ay tahay meel ay u siman yihiin dhammaanba dadka Soomaaliyeed isla markaana aysan jirin cid gaar ah oo loogu arki karo in aysan xaq u lahayn ku noolaanshaha deegaannada Puntland, waxaana uu intaasi ku daray hadda in ay xiriiro la samaynayaa odayaasha dhaqanka ee dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan Puntland si xoojinta amniga la iskaga kaashado.
Duqa magaaladda Boosaaso C/risaaq Xareed Ismaaciil, oo isna u warramay idaacadda Daljir ayaa shacabkii bannaanbaxa samaynayey ka codsaday in ay illaaliyaan ammaanka iyo kala danbaynta oo ay joojiyaan bannaanbaxa rabshadaha wadta ee ay samaynayeen.
Bannaanbaxa maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee looga soo horjeeday falalka amni darro gaar ahaan qaraxyada ku sii kordhaya deegaannada Puntland, ayaan ahayn midkii ugu horreeyey ee looga soo horjeedo falal gurracan ee ka dhaca gobollada Puntland, waxaana sidaan oo dhawr jeer isku-soobax u sameyey dadweyne caraysan oo ka dhiidhiyayey falalka wax loogu dhimayo amniga Puntland.